डुकाडीको सुपर मोटरसाइकल जुन भारतमा जम्मा ५ जनाले मात्र किन्न पाउने छन् ! « Light Nepal
डुकाडीको सुपर मोटरसाइकल जुन भारतमा जम्मा ५ जनाले मात्र किन्न पाउने छन् !
Published On :6December, 2018 9:49 am
काठमाण्डौ – इटालीको प्रसिद्ध प्रिमियम सुपर मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी डुकाटीले २०१९ मोडल प्यानिगेल भीफोर आर भारतमा सार्वजनिक गरेको छ । सो सुपर मोटरसाइकल मूल्यका हिसाबले सामान्य लग्जरी कारभन्दा महँगो रहेको छ । यसको मूल्य ५१ लाख ८७ हजार भारु तोकिएको छ ।